Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.2.3 Isiphetho
Amaphrojekthi wokuqamba abantu ahlanganisa umsebenzi wabaningi abangewona ochwepheshe ukuxazulula izinkinga ezilula-ezinkulu-ezingenakuxazululwa kalula ngamakhompyutha. Basebenzisa uhlelo lokuhlukanisa-ukusebenzisa-ukuhlanganisa ukuxazulula inkinga enkulu emanzini amaningi alula angasombulula abantu abangenawo amakhono akhethekile. Amasistimu wokuqhathanisa abantu abasebenzisa ikhompyutha asebenzisa nokufunda komshini ukuze kukhuliswe umzamo womuntu.
Ekucwaningweni kwezenhlalakahle, amaphrojekthi okubalwa komuntu angasetshenziswa kakhulu ezimweni lapho abacwaningi bafuna ukuhlukanisa, ikhodi, noma ukubeka izithombe, ividiyo, noma imibhalo. Lezi zigaba ngokuvamile akuwona umkhiqizo wokugcina wocwaningo; esikhundleni salokho kuyinto eluhlaza yokuhlaziywa. Isibonelo, ukubhaliswa kwezixuku zezombusazwe zezombusazwe kungasetshenziswa njengengxenye yokuhlaziywa mayelana nokushintsha kwempikiswano yezombangazwe. Lezi zinhlobo zokuhlukanisa ama-microtasks cishe zizosebenza kangcono uma zingadingi ukuqeqeshwa okukhethekile futhi uma kunesivumelwano esikhulu mayelana nempendulo efanele. Uma umsebenzi wokuhlukanisa uhamba phambili-njengokuthi, "Ingabe le ndaba yenzelwe ukukhathazeka?" - ke kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi ngubani ohlanganyelayo nokuthi yiziphi izinto ezingase zilethe. Ekugcineni, ikhwalithi yokukhishwa kwemiklamo yokubalwa komuntu ixhomeke emgangathweni wemigomo abantu ababandakanyekayo abahlinzeka ngayo: udoti, udoti ngaphandle.
Ukuze uqhubeke nokwakha intuition yakho, ithebula 5.1 linikeza izibonelo ezengeziwe zokuthi ukubalwa komuntu kuye kwasetshenziselwa ucwaningo lwezenhlalakahle. Leli tafula libonisa ukuthi, ngokungafani ne-Galaxy Zoo, amanye amaphrojekthi amaningi okuqhathanisa abantu asebenzisa izimakethe ze-microtask zabasebenzi (isib. I-Amazon Mechanical Turk) futhi zithembele kubasebenzi abakhokhelwayo kunokuba izisebenzi zokuzithandela. Ngizobuyela kulolu daba lokugqugquzela okubandakanyekayo lapho nginikeza iseluleko ngokudala iphrojekthi yakho yobambiswano yokubambisana.
Ithebula 5.1: Izibonelo zezinhlelo zokuqhaqha kwabantu ekuHlangweni koMphakathi
Ikhodi yezinhlangano zezombusazwe zamaqembu ezombusazwe Umbhalo Imakethe yemisebenzi ye-Microtask Benoit et al. (2016)
Khipha ulwazi lomcimbi kusuka ezihlokweni zezindaba ku-Occupy Protests kumadolobha angu-200 ase-US Umbhalo Imakethe yemisebenzi ye-Microtask Adams (2016)
Hlela izihloko zephephandaba Umbhalo Imakethe yemisebenzi ye-Microtask Budak, Goel, and Rao (2016)
Khipha ulwazi lomcimbi kusuka kwidayari yamasosha eMpini Yezwe 1 Umbhalo Amavolontiya Grayson (2016)
Thola ushintsho kumamephu Izithombe Imakethe yemisebenzi ye-Microtask Soeller et al. (2016)
Hlola ikhodi ye-algorithmic Umbhalo Imakethe yemisebenzi ye-Microtask Porter, Verdery, and Gaddis (2016)